Vaovao - Laser laser ao amin'ny fampirantiana Smart Factory any Sina
Masinina fanapahana laser amin'ny takelaka metaly
Metal Plate sy Tube Laser Cutting Machine
Robotic Arm 3D Laser fanapahana sy milina fanamafisam-peo
Masinina fanapahana laser tsy metaly
Site an'ny mpanjifa
Golden Laser ao amin'ny fampirantiana Smart Factory International China
Golden Laser ho mpanamboatra fitaovana laser lehibe ao Shina dia faly manatrika ny Fampirantiana Smart China International (Ningbo) Iraisam-pirenena faha-6 sy ny fampirantiana China Capital Capital Expo (Ningbo Machine Tool & Mould Exhibition) faha-17.
Ningbo Iraisampirenena Robotics, fampiroboroboana manan-tsaina ary fampiratiana automation indostrialy (ChinaMach) dia natsangana tamin'ny taona 2000 ary miorim-paka ao amin'ny toby famokarana any Shina. Hetsika lehibe ho an'ny indostrian'ny fitaovana sy ny milina eken'ny ekipa ary eken'ny Ministeran'ny Varotra sy ny Governemantan'ny Vondrom-bahoakan'i Ningbo io. Ny vondrona mpividy terminal any amin'ny faritry ny Yangtze River Delta any Sina no safidy tsara indrindra ho an'ny fitaovana fitaovana milina, automatique, fanamboarana manan-tsaina ary mpamokatra robot hanitarana ny tsena any Ningbo, Zhejiang ary ny faritry ny Yangtze River Delta any Shina. Izy io dia miara-miasa amin'ny China Machinar Engineering Co., Ltd. ary Yazhuo Exhibition Service Co., Ltd. Ny Ningbo Machine Tool Equipment Exhibition dia hatao amin'ny fotoana iray ihany.
Nanjary robot teo an-toerana misy fiantraikany bebe kokoa izy io, marika fampiroboroboana manan-tsaina ary fampiratiana automation indostrialy, ary noderain'ny orinasa marobe.
Golden Laser dia te-hanaraka ny dingana vaovao amin'ny fanavaozana ny indostria sy ny hafainganan'ny fitomboan'ny indostria vao misondrotra, mampihatra ny paikady Made in China 2025, mampifangaro sy mitrandraka ireo filàna vaovao, ary mamorona fotoana vaovao amin'ny tsena.
Haneho milina fanapahana laser laser 3 karazana izahay:
1: Milina fanapahana fantsom-boasary fibre vita amin'ny laser feno P1260A
● P1260A milina fanapahana fantsom-by kely dia natao ho an'ny fantsom-pandrefesana kely (20mm-120mm).
● Famolavolana paikady, fitsitsiana ny vidin'ny fitaterana ary fanatsarana ny fampiasana ny haben'ny orinasa.
● Ampiasaina amin'ny chuck haingam-pandeha haingam-pandeha sy rafitra famahanana mandeha ho azy, afaka mahatsapa fanamboarana mandeha ho azy sy manatsara ny fahombiazan'ny famokarana.
2: Masinina fanapahana Tube laser P2060B
● Mora ampiasaina, endrika tsy misy fametrahana tsy manam-paharoa, asongadin'ny serivisy ivelan'ny boaty.
● Mora ny mahazo ny famatsiam-bola, ity fanapahana fantsom-laser ity dia afaka mihaona amin'ny karazana fanodinana fantsona endrika. Ny isan'ireo savaivony fanapahana dia hatramin'ny 20mm ka hatramin'ny 200mm.
3: Ultral-high Power 12000w Fiber Laser Cutting Machine GF-1530JH ho an'ny fanapahana ravina vy
● Fahaizan'ny fanapahana laser mahery vaika, afaka manapaka takelaka metaly matevina hatramin'ny 60mm.
● Teknolojia fanapahana rivotra ambany fanerena. Ny hafainganam-pandehan'ny fanapahana ny rivotra dia intelo ny hafainganam-pandehan'ny fanapahana ôksizenina, ny fihenan'ny angovo totalin'ny 50%, ary ny vidin'ny fandidiana kosa ambany.
● Famaritana avo lenta. Ny sombin-tsavoka vokarina mandritra ny dingan'ny fanindronana dia esorina arakaraka ny habeny, ary milamina sy feno ny sisin'ny fanapahana.
● Loharanom-boalobok'i China Laser sy mpanara-maso Hypcut mora ampiasaina amin'ny mpandraharaha ary miaraka amin'ny vidin'ny compitiv eny an-tsena.
Inona no andrasanao? Andao handeha amin'ny fampirantiana ary hijery ny kalitaon'ny milina.